Inkonzo-Utien Pack Co,. Ltd.
I-Utien Pack ibonelela ngenkonzo enye yephakeji, kubandakanya ukubonisana ngokupakisha, uqeqesho lokusebenza, kunye nezisombululo zetekhnoloji.
1, thethwano package Professional kunye nesisombululo
I-Utien Pack iyakwazi ukubonelela ngesisombululo esonelisayo sokupakisha ngokweemfuno zabathengi ezifunayo.
Phezu kwesibheno sokupakisha kwabathengi, iqela lethu leenjineli kungekudala liza kuqala ukuhlalutya, ukuxoxa kunye nokuyila isindululo sokupakisha. Ngokuyila umsebenzi womatshini, ulungelelwaniso lobungakanani bomatshini, kunye nokongeza izixhobo ezifanelekileyo zomntu wesithathu, sizinikele ekwenzeni isisombululo ngasinye sokupakisha sisebenze ngokugqibeleleyo kwimveliso yabathengi.
2, Machine lokulungisa
Phambi kokuhanjiswa komatshini, iUtien Pack iya kwenza ukulungisa ingxaki ngokujonga zonke iinkcukacha, ezinje ngokuseta kweparameter, umfanekiso oqingqiweyo, izinto ezidibeneyo, uphawu lwamalungu, njl.
3, Emva kwenkonzo yentengiso
I-Utien Pack iqinisekisa iwaranti yeenyanga ezili-12 kumatshini wethu, ngaphandle kweendawo ezinxitywayo ezinje nge-silicon strip kunye nocingo lokufudumeza. Xa kukho nayiphi na ingxaki kumatshini, siyavuya ukunika isikhokelo sobuchwephesha kwi-intanethi. Kwakhona injineli yethu iyafumaneka ukuya phesheya ngofakelo lomatshini, uqeqesho olusisiseko kunye nokulungiswa. Iinkcukacha ezingaphezulu kunokuxoxwa ngazo ngakumbi.
4, iphakheji Testing
Abathengi bamkelekile ukuba bathumele iimveliso zabo kumveliso wethu ukuze bavavanywe simahla.